Tube Nasogastric azo ampiasaina
Lalambe Mask lilyngeal Classical
Zavamaniry mask Laryngeal Maskà
Famolavolana manokana an'ny laryngeal Mask
Famokarana & QC
Fanamarinana & haja
Miaraka amin'ny 5.000 metatra toradroa sy ny atrikasa fanadiovana GMP ho an'ny fananganana 100000 metatra tora-droa amin'ny laboratoara mahazatra. Ny atrikasa dia feno fitaovana famokarana vaovao, ahafahana mameno ny fangatahana herinaratra 2 tapitrisa vokatra vokarina
R&D Ary QC
Sungood dia nifikitra hatrany amin'ny "azo antoka sy mahomby ary manara-penitra ary mampahazo aina" ho toy ny foto-keviny.
Ny orinasa dia manana injeniera 15 R & D ary kalitao. Mandritra izany fotoana izany, izy io dia miara-miasa akaiky amin'ny oniversite toa ny Anjerimanontolon'i Zhejiang sy ireo manam-pahaizana sy mpampianatra fanta-daza amin'ny indostria mba hanomezana mavitrika ny vokatra ara-pitsaboana azo antoka sy mahomby amin'ny mpanjifa.
Sungood dia mametraka ny rafitra fitantanana kalitaonany manokana mifanaraka amin'ny fenitry ny ISO13485, manatanteraka famerenana anatiny tsy tapaka ary manatanteraka ny votoatin'ny rafitra kalitao amin'ny asa sy famokarana isan'andro.
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny vokatra ao amin'ny orinasa dia nahazo mari-pahaizana CFDA, fanamarinana CE CE ary fanamarinana FDA amerikana.
Adress: NO.550 Yinhai Street., Xiasha Fivoarana ara-toekarena sy teknolojia, Hangzhou, China Zip code: 310018
Fandraisana: 86-18968041785 Fandraisana: 86-0571-87687066-8015 Fax: 86-0571-87687098
E-mail: sgwm@sungoodmed.com Varotra an-trano: 0571-87687056